Izindlu Zezinhlekelele ze-Airbnb
Yabelana ngendawo yakho unomphela
Joyina umphakathi wababungazi abanomusa. Nikela mahhala ngendawo yakho eyengeziwe kubantu abadinga izindlu okwesikhashana.
Nikela ngendawo yakho
noma unikele ekuxhaseni isikhwama sokuhlala
Abantu abangaphezu kuka-50,000 bathole izindawo zokuhlala zesikhashana, ngenxa yababungazi Abasezindlini Zezinhlekelele.
Akukhathaliseki ukuthi abashadikazi abasha abalahlekelwe ikhaya labo emlilweni wequbuka, isiguli esinesifo somdlavuza esidinga ukunakekelwa okukhethekile, noma umndeni obaleka izimpi ezweni lawo–Izindlu Zezinhlekelele zivumela ababungazi bahlinzeke ngendawo yabo mahhala kubantu ababhekene nezimo ezinzima.
U-Susan wamukela u-Mussa e-Denver
Umndeni uthola indawo yokuhlala edolobheni lase-Mexico
Imindeni emibili iba abangane bempilo yonke
Indlela ukubungaza okusebenza ngayo
Sitshele ngendawo yakho nokuthi kungani ufuna ukubungaza
Uzothola imilayezo evela ezinhlanganweni ezingenzi-nzuzo noma kubabaleki
Uzovumelana ngezinsuku bese ubeka okulindelwe kusengaphambili
Yabelana ngendlu yakho nabantu abasendleleni yokusinda
Lezi zivakashi zidinga izindawo zokuhlala ngenkathi zithola ukwelashwa noma lapho zihambela ukuphumula. Ukuhlala kuhlanganiswa yizinkampani ezingenzi-nzuzo ezisiza iziguli ukuba zithole ukunakekelwa ezikudingayo.
Yamukela abasanda kufika njengoba bejwayela ukuphila kwabo okusha
Lezi zivakashi zivame ukuthuthela edolobheni elisha futhi zethembe ukuba zizoba ingxenye yomphakathi. Ukuhlala kuqondiswa yizinhlangano zokusiza ababaleki egameni lamakhasimende abo.
Yiba yingxenye yohlelo lomphakathi wakho lokusiza ngesikhathi senhlekelele
Lokhu kuhlala kwenzeka lapho isenzakalo, njengomlilo wasendle noma isiphepho, kuthinta umphakathi. Izivakashi kuba ngabantu abaye kwadingeka babalekele endaweni ephephile noma izisebenzi ezizosiza.
Ngenkathi lungekho uhlelo lokuhlola olungenaphutha, emhlabeni wonke siphethe abamele ama-agency nezivakashi ezibhukha ngokuqondile nge-Airbnb ngokumelene nokulawula, ubuphekula, kanye nohlu lokulinda izinqumo.
Izimfuneko zezivakashi nokuqinisekiswa
Ngaphambi kwanoma ikuphi ukuhlala, amalungu abasebenzi benhlangano engenzi nzuzo noma labo ababalekele inhlekelele kumelwe benze i-akhawunti ye-Airbnb. Bazocelwa ukuba banikeze imininingwane efana namagama abo, usuku lokuzalwa, isithombe, inombolo yocingo, ikheli le-imeyili kanye nolwazi lokukhokha.
Ubani esisebenza naye
Sibambisene nezinhlangano ezithembekile ukuze siqondisise imiphakathi esiyisebenzelayo nokuthi singayisiza kanjani kangcono. Lezi zinhlangano ezingenzi inzuzo zisebenzisa Izindlu Zezinhlekelele ukutholela amaklayenti azo izindawo zokuhlala kanye nokusiza ukuhlinzeka ukwesekwa kwababungazi ngesikhathi sokuhlala.
Ingabe ihlangano yakho engenzi nzuzo ifuna ukusebenza neZindlu Zezinhlekelele? Sithumele inothi.